Al-Shabaab oo afduubtay gabadh 6 jir ah oo ku nool Gedo, Soomaaliya. - Latest News Updates
Al-Shabaab oo afduubtay gabadh 6 jir ah oo ku nool Gedo, Soomaaliya.
Xagjiriin al-Shabaab ah ayaa gabar 6 jir ah ka afduubtay qoyskeeda magaalada Harbole, gobolka Gedo, Soomaaliya. Qoyska laga afduubtay Gabadha oo careysan ayaa sheegay in xagjiriinta ay guriga yimaadeen ayna dalbadeen gabadha. Gabadhu waxay ku nooshahay albinism.
“Afduubayaashu waxay gurigooda ku galeen habeenka dhexe, waxayna dalbanayeen in la muujiyo halka gabadhu jiifsatay. Waxay ka soo qaateen sariirteeda oo waxay ku xidhay gaari, “aabaheed Cabdicasiis Weli ayaa sidaas yidhi.
Kooxaha Shabaabka ee afduubka samaysay ayaa lagu sheegay tiradoodu ay ka tirsanaayeen shan waxay ku hadleen afka Soomaaliga. Weli ayaa sheegay in aysan waxba ka xadin guriga markii uu socday riwaayad afduubay Arbacadii.
Marka laga reebo xagjirka dilka ah, qaabka Al-Shabaab ee howlgalka ayaa la mid ah afduubyada. Inta badan afduubayaashii hore waxay ahaayeen wiilal dhalinyaro ah oo lagu qasbay in ay ku biiraan kooxda xagjirka ah sida dagaalyahannada, gabdhaha da’da yar iyo haweenka da’da yar ee la afduubay inay noqdaan addoomo galmo ah oo xagjiriinta ah. Xubin ka tirsan golaha deegaanka Sheekh Mustafa Cali ayaa sheegay in tani ay ahayd markii ugu horreeysay ee afduub loo geysto ilmo.
In kastoo dhacdo cusub oo Soomaaliya ka dhacay, afduubyo iyo dilal dadka albinismka ku ah Bariga Afrika maahan kuwo cusub. Dadka ku nool gobolka, gaar ahaan Tansaaniya, ayaa lagu beegsaday dilal caan ah. Qayb ka mid ah dadku waxay aaminsan yihiin in bixinta qaar ka mid ah qaybahooda jirka waxay keenaan nasiib wanaagsan. Jaaliyado kale waxay dilaan carruurta qaba albinism iyadoo aaminsan in xaaladdu ay tahay mid xun.
“Waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay gashay jahwareerka adduunka si ay naftooda u ilaaliyaan. Sheekh Maxamuud wuxuu yiri: “Wax qarsoodi ah maahan in xagjirayaashu ay ku adkaatay caqabado badan, haddaad ka timi hoggaamiye caafimaad oo aad u culus, arrimaha maaliyadeed, maqnaanshaha iyo taas oo ka sii daraysa qarxintii bamka joogtada ah ee ay geysteen Ciidamada Difaaca Maraykanka iyo Kenya, “ayuu yiri.
Isha Warka: Star